MOE (WikiMyanmar) ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ (အပိုင်း – ၁) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
MOE (WikiMyanmar) ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ (အပိုင်း – ၁)	Posted by mm thinker on August 8, 2008
မြန်မာ့အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်း (Myanmar Online Encyclopedia – MOE) သည် မြန်မာဘာသာနှင့် ရေးသည့် ဝီကီပီဒီယားဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ www.wikimyanmar.org ကို ဝင်လိုက်လျှင် ဗဟိုစာမျက်နှာ (Main Page)သို့ ရောက်ပါမည်။ ဗဟိုစာမျက်နှာတွင် လျှပ်တပြက်လိုအပ်မည့် အကြောင်းအရာများကို အလွယ်တကူတွေ့ရှိရန် Link ချိတ်၍ ညွှန်းထားပါသည်။ ဗဟိုစာမျက်နှာကို ကြည့်လျှင်ပင် လာရောက်ဖတ်ရှုသူတစ်ယောက်သည် ပရိသတ်သက်သက်မျှမဟုတ်ဘဲ၊ မိမိတတ်သိ ကျွမ်းကျင်သည်များကိုလည်း ရေးသားနိုင်ရန် လမ်းဖွင့်ပေးထားသည်ကို တွေ့ရပါမည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို “ရှာဖွေရေး”နှင့် “ဖြည့်စွက်ရေးသားရေး”သည် အညမည ဆက်စပ်နေပါသည်။ (၁.၁) ရှာဖွေခြင်း
မိမိသိလိုသောအကြောင်းအရာတစ်ခုကို သော့ချက်စကားလုံး (Key Word) ဖြင့် ညာဘက်ကော်လံတွင်ရှိသော “ရှာရန်”ဆိုသည့် နေရာတွင် ရိုက်၍ ရှာကြည့်ပါ။ မြန်မာစကာလုံးဖြင့် ရှာဖွေရေးတွင် သတိပြုရမည့် အချက်တချို့ကို ပြောလိုပါသည်။ မြန်မာစကားလုံးသည် အပင့်၊ အရစ်၊ အသတ်၊ အရေအတွက်တွင်လည်း ဂဏန်းဖြင့်၊ စာဖြင့်၊ စကားလုံး ပွခြင်း၊ ကျစ်ခြင်းများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သော့ချက်စကားလုံးကို စဉ်းစားရာတွင် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ (၁.၂) သွယ်ဝိုက်ရောက်ရှိရေး (Redirect)
“အဒမ်စမစ်”အကြောင်း MOE တွင် ရှာမည်ဆိုပါစို့။ မြန်မာကျောင်းသုံးစာအုပ်က “အဒမ်စမစ်”ဟု ပေါင်းသည်။ ဦးကြည်မြင့်၏ “စီးပွားရေးပညာကျော်များ”စာအုပ်တွင် “အာဒမ်စမစ်”ဟု ရေးပြန်သည်။ အချို့ကလည်း “Adam Smith”ဟု အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာတစ်ယောက်အနေဖြင့် ဤအကြောင်းအရာအတွက် မြန်မာ့အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်းတွင် သော့ချက်စကားလုံး သုံးမျိုးဖြင့် ရှာရန် တာဝန်ရှိနေလေသည်။ MOE တွင် အဒမ်စမစ်အကြောင်း အဦးအစရေးသူကဖြစ်စေ၊ MOE အက်ဒမင်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ သုံးမျိုးစလုံးအနက် မည်သည့်ဟာဖြင့် ရှာရှာ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းအရာသို့ ရောက်ရှိအောင် သွယ်ဝိုက်ရောက်ရှိစေခြင်း (Redirect) လုပ်ထားလျှင်မူ အဆင်ပြေစွာဖြင့် တစ်ချက်တည်း ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ (လုပ်နည်းကို ဤနေရာ တွင် ကြည့်ပါ်။) သို့သော် ဤသို့ စကားလုံးထွေပြားဖွယ်ရှိသော အကြောင်းအရာတိုင်းသည် လတ်တလော MOE အခြေအနေနှင့် မြန်မာဘာသာစကား၏ သဘာဝအရ အဆင်ပြေပြေနှင့် အကြောင်းအရာမှန်သို့ ရောက်သွားမည်ဟု အခါခပ်သိမ်း မမျှော်လင့်အပ်ပေ။ အတွေ့အကြုံတစ်ခုနှင့် ဥပမာပေးရလျှင် ကျွန်ုပ်သည် “သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန်” အကြောင်းကို MOE ၌ ရေးခဲ့သည်။ များမကြာမီ ကျမ်းညွှန်းတစ်ခု၌ ယင်းအကြောင်းအရာကို “MOE အတွင်း အချိတ်အဆက်” (Internal Link) ပြန်ပေးသောအခါ “မရှိ”ဟု ပြနေပါသည်။ ဘာမှားသနည်းဟု ဆန်းစစ်သောအခါ ကျွန်ုပ်သည် ထိုကျမ်းအကြောင်းရေးပြီး ခေါင်းစဉ်တင်သောအခါက “သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန်ကျမ်း”ဟု အဘိဓာန်နောက်၌ “ကျမ်း”တစ်လုံးအပိုထည့်ကာ တင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှာမတွေ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့နှင့် နှစ်မျိုးလုံး ဘယ်လိုရှာရှာ ရောက်နိုင်အောင် သွယ်ဝိုက်ရောက်ရှိစေခြင်း (Redirect) လုပ်ထားလိုက်ရပါသည်။
အမှန်တကယ်တွင် MOE ၌ မှတ်ပုံမတင်ထားသော်လည်း ဝင်ရောက် ပြင်ဆင်ရေးသားခွင့်ရှိပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာ မခက်ခဲပါ။ အလွယ်တကူပင် ပြီးစီးနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့် ရနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးကို ဤနေရာ တွင် ဖတ်နိုင်ပါသည်။ (၂.၂) ရေးသားခြင်း
မိမိရေးလိုသည့် အကြောင်းအရာ ဥပမာ “အချစ်”ဆိုပါစို့။ ရှာရန်ထဲတွင် ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ (There is no page titled “အချစ်“. You can create this page.) ဟု တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ အောက်ဖက်တွင် “ခေါင်းစဉ်ဆက်စပ်မှု” (Title Matches) နှင့် “စာသားဆက်စပ်မှု” (Text Matches) ကိုလည်း တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ လတ်တလောရေးနေချိန်တွင် စာသားဆက်စပ်မှု၌ စာရေးဆရာများ၏ အချိတ်အဆက် (Link) ကို တွေ့နေရပါသည်။ အချစ်အကြောင်းကို စတင်ရေးသားရန်အတွက် “create this page”ဆိုသည်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ရေးသားရန် စာမျက်နှာတစ်ခု ကျလာပေလိမ့်မည်။ ထိုအထဲတွင် စ၍ရေးနိုင်ပါပြီ။ ရေးသားရာတွင် အသုံးပြုရမည့် ကုဒ်များ၊ ခေါင်းစဉ်ခွဲပုံ၊ ပုံထည့်သွင်းပုံ၊ စာလုံးအမည်း၊ အစောင်းပြုလုပ်ပုံ၊ ဇယားပြုလုပ်ပုံ၊ Info Box ခေါ် နောက်ခံအချက်အလက်ဇယားထည့်သွင်းပုံတို့ကို ဤနေရာ တွင် ကြည့်ရှုလေ့လာပါ။ (၃) ရေးသားမှုစနစ်
← သင်ကာ၏ Blogging တစ်နှစ်လည်	CrazY BangkoK →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...